Na 2017 dia manamarika ny fiakaran’ny vidim-panafody mivantana amin’ny orinasa goavana sy madinika izay mikatsaka ny fanampiana ireo mpanindrahindra malaza indrindra hanampiana ny tetikady ary hampiroborobo kokoa ny marika amin’ny mpanjifa. Miaraka amin’ny fanadihadiana manamarika fa mety hisy vokany raty Mamolavola fiverenan’ny 960% amin’ny fampiasam-bola, azo antoka ny wayy hoe ny mpivarotra entana dia eto mba hijanonana.
Na eo aza ny fitomboan’ny fampiroboroboana ny indostria, mbola eo amin’ny toerana misy ny fahasamihafana mbola ilaina ho an’ny marika sy orinasa amin’ny tetikady ara-barotra. miaraka haino aman-jery sosialy ary ny dokam-barotra nomerika mankany amin’ny ambaratonga manran-tany, dia ilaina ny filàna ny fahasamihafana.
1.1 Algoritmas izay malemy
2 Na onjam-peo vaovao avy amin’ireo mpanentana isan-karazany
3.1 Ann Handley
3.2 Mari Smith
3.3 Madalyn Sklar
4 Na fahasamihafana dia zava-dehibe ho an’ny taranaka vaovao
„Niverina tao amin’ny 2015“, Verslininkas nanangona lisitr’ireo influencétiques ara-barotra an-tserasera mba hijery (lahatsoratra nesorina). Zavatra iray nokaramain’ny lisitra ny hoe ny ankamaroan’ny mponina no fotsy hoditra.
Heverinao fa ny 2017 diakony hahita fahasamihafana bebe kokoa amin’ny tanjon’ny influenceriai.
Nefa tsia. Straipsniai iš „Manampahefana Digital n“ aktualumo dia manho fa ny fanehoana ny vehivavy sy ny vitsy an’isa dia mbola tsy ampy ao anatin’ny indostria.
Tsy mahagaga raha efa nisy foana ny valin-davenona ho an’ny vehivavy sy ireo vitsy an’isa ao amin’ny sehatra "influenceriai".
Algoritmas izay malemy
„Lahatsoratra“ yra „navoakan’ny“ lahatsoratra „Huffington Post Mifanakalo“ hevitra amin’ny algoritmas, tinkantis „Linkedin“, kuris buvo pradėtas 2013 m. "faritra, sekta ary kolontsaina izay miantraika sy mitondra fiadian-kevitra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena".
Mazava fa i Linkedin dia manana fitoviana eo amin’ny lahy sy vavy amin’ny algoritmas, ay tatitra avy amin’ny Seattle Times nanaporofo izany. Tsy vao tamin’ny 2016 izany Nanapa-kevitra ny hanavao ny algoritmas i Linkedin mba tsy hisian’ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy ny vavy rehefa mikaroka sy manasa olona manaraka azy.
Ny fiavian’ny fampahalalam-baovao sosialy dia nahita marika maromaro nitsambikina tamin’ilay fiaramanidina mpilatsaka an-tsehatra mba hanangona mpijery vaovao. Mampalahelo fa indraindray ny mpividy sy ny sampan-draharahan’ny dokam-barotra no manamarika ny marika ary mifarana amin’ny fampielezan-kevitra izay namela resa-be teo amin’ny marika.
Ny adi-panaon’ny Pepsi vao haingana no ohatra iray aminizizas, izay nandraisan’izy ireo Kendall Jenner amin’ny sehatra ara-barotra izay toa manimba ny maha-zava-dehibe ny hetsi-panoherana "„Black Lives Matter“" tao Batonas Ružas. Ity dia mampiseho ny fomba tsy ahafahan’ny mpivarotra raharaham-barotra ao Pepsi miaraka amin’ny mpihaino azy.
Na orina, lehibe sy madinika, dia nanomboka nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny varotra kolontsaina marolafy ao anatin’ny marika ary nanomboka nanangona fahasamihafana bebe kokoa tamin’ny fampielezan-keviny.
„Mpanjifa Target fotsiny no nanao izany tamin’ny fanomezana lamaody momba azy Amin’ny fanekena fa "ny vehivavy dia tonga amin’ny endriny rehetra, ny habeny sy ny foko" ay ny tsy firaharahiana ireo mpihaino ireo dia fanaraha-maso goavana ny fanentanana teo aloha.
Naujas fitantanana Shade dia masoivohon’ny fitantanana ny maintin’ny mainty hoditra sy maoderina.
Naujas tinkamas žaislas „Shade Management Manolotra sehatra ho an’ny marika sy ny masoivoho mba hifandray amin’ny influenceé ny loko sy ny vitsy an’isa“. Irena lalanos retrospektyva ireo hetsika samihafa ireo dia manampy amin’ny fampiroboroboana ny varotra any aminny orinasa maro samihafa ary manantena ny hanomboka ny onjampeo vaovao.
Na onjam-peo vaovao avy amin’ireo mpanentana isan-karazany
Ny mpikaroka dia mila misaina ivelan’ny Boy Ary manintona ny mpanafika izay maneho tsara kokoa ny fiarahamoniny raha te-hanohy ny fironana izy ireo. Soa ihany fa misy vehivavy maromaro sy mpitaingin-tsoavaly avy amin’ny foko samihafa misongadina ary manao ny marika ao amin’ny orinasa.
Nandritra nauja foto lavos indrindra, ny sehatry ny fivarotana dia fitarihana ny lehilahy. Tato anatin’ny taona vitsivitsy anefa dia nahita vehivavy but dia be izay tsy vitan’ny manatsara ny fivarotana nomerika fotsiny fa manaporofo fa afaka ny hahomby toy ireo lehilahy ao amin’ny orinasa izy ireo.
Fantatra amin’ny maha-mpisava lalana azy ao amin’ny indostrian’ny varotra dizitaly, Ann Handley no Manampahefana Ambony mamba most marketingProfs ary mpanoratra gazety iray ho an’ny gazetin’ny Entrepreneur. Navoakan’i Forbes yra daug amin’ireo vehivavy bilaogera ambony indrindra sady vehivavy manan-kaja indrindra ao amin’ny media sosialy, manome fomba fijery vaovao ho an’ny marika i Handley miaraka amin’ny fomba fijery tsy manam-paharoa ao amin ny varotra.
„Araho ary“ daugialypis vaizdas: /Ann.Handley
Tsy misy afa-tsy "mpanjakavavin’ny Facebook" tokana ary Mari Smith izany. „Mpitondra fanta-daza amin’ny“ mediam-bola „Facebook sy media“, „Smith Smith“, „fandraisana andraikitra amin’ny media sosialy ho an’ireo mpandraharaha sy orinasa ho amin’ny sehatra hafa amin’ny anarana lehibe toa an’i Tony Robbinsas, seras Richardas Bransonas sy Dalai Lama. Raha ianao no izy mikasa hanatsara ne fidiranao Facebook, Mari Smith nėra olona handeha.
„Araho ary“ daugialypis vaizdas: / MariSmith
Twitter dia fitaovana mahagaga ho an’ny marika sy ny mpitaona amin’ny fifandraisana amin’ny mpihaino azy ary ny fampiasana azy tsara dia mety hitondra vokatra tsara. Irena marika miezaka hanatsara ny fidiran’izy ireo amin’ny Twitter dia mitodika any aminda Madalyn Sklar, iray amin’ireo vehivavy manan-danja indrindra ao amin’ny Twitter. izy bilaogy, mamorona votoaty ary manabe orinasa sy orinasa momba ny fomba ahafahan’izy ireo mahazo mpanaraka bebe kokoa amin’ny Twitter.
„Araho ary“ daugialypis vaizdas: @Jinnyboy . @Poconggg . / Pimtha
Na fahasamihafana dia zava-dehibe ho an’ny taranaka vaovao
Naujausios žinios apie maminaviną iki 2050 m., „Ireo vitsy an’isa“ (Ispanija, Aziatika, ara Afrikana-Amerikana / juoda) dia hitazona ny 54 isan-jaton’ny mponina Amerikana. Ankoatr’izany ny tsenan’ny Aziatika mitombo hatrany, dia hita fa ny marika sy ny orinasa dia mila manangona ny tsy fahampiana ary mahatsapa bebe kokoa ny fahasamihafàna raha ny momba ny marketingo rinkodara.
Isika amin’ny maha-mpangalatra ants dia dia mila miaraka amin’ireo fotoana ary manova ny fomba fijerintsika ireo mpanararaotra na miala aina.
Ny 2017 dia manamarika ny fiakaran’ny vidim-panafody mivantana amin’ny orinasa goavana sy madinika izay